Yantai Sanniu Kunze & Export Co, Ltd.
Yantai Sanniu Kunze & Export Co.Ltd inyanzvi chikafu uye chinwiwa mumiriri uye co kurongedza kambani pamusoro pemakore gumi.
Kuve anotungamira uye anovimbwa mumiriri muindasitiri
Ipa chikafu chinonaka uye chinonaka.
Gadzira yakawedzera kukosha kune vatengi uye vanotengesa, kuhwina-kuhwina mamiriro.
Yantai Sanniu Import & Export Co, Ltd inyanzvi yekudya uye chinwiwa mumiriri uye co kurongedza kambani kweanopfuura makore gumi. Isu takagadzira hukama hwakasimba nemafekitori mazhinji uye vagadziri muChina.
Isu tine hunyanzvi mukuburitsa nekuparadzira zvakasiyana siyana zvekuChinese chikafu kumisika yepasi rose inowirirana kuti vasangane nezvinogara zvichichinja zvinodiwa uye zvavanofarira mumisika yanhasi. Tine zvigadzirwa zvedu zvine mazita uye zvakare tinobatsira epamba makambani madiki nepakati ekudya kuti vatengesere kutengesa. Parizvino, isu takawana zvega zvekutengesera kunze kwekodzero kodzero dzemhando dzakawanda uye zvigadzirwa. Nzvimbo yedu yevatengi inosanganisira, asi haina kuganhurirwa kune vekunze vatengesi, masupamaketi, vagoveri, e-commerce chitoro, misika yekutengesa, zvitoro zvekuchengetera uye zvitoro zviri nyore. Basa redu ndere kubatanidza uye kutumira kunze kweChina zvigadzirwa zvechokwadi zvigadzirwa. Chigadzirwa chedu chinosanganisira asi hachiganhurike kune akasiyana marudzi ezvikafu zvekudya, chikafu chiriporipo, pamwe nezvinodiwa zvezuva nezuva, semabhisikiti uye makuki, machipisi embatatisi, michero yemumagaba, zvakaomeswa bhinzi curd zvigadzirwa, sesame paste, soy muto nevhiniga, nezvimwe.
Kuvimba nezvedu nhoroondo yebhizinesi uye mhando sevhisi system, isu tinokupa iwe yemhando yepamusoro uye inokwikwidza chikafu chine hutano. Isu tinokwanisa kupindura kune zvakaoma zvirevo uye nekuendesa mhinduro dzecheni mune pfupi nguva. OEM / ODM sevhisi inowanikwa kune vatengi.
Kubva muYantai, tichitarisa kune nyika yese, pamwe chete isu tichawana mukana, uye kugadzira win-kuhwina kubatana. Gamuchirai shamwari kubva kwakasiyana hupenyu kuti vatishanyire uye kutaurirana kwebhizinesi. Kutarisira mberi kuve mumwe weako akanakisa ebhizinesi vadyidzani.
Tiudze zvaunoda uye nezvinodiwa, seanoshanda uye akavimbika mutengesi, isu tine basa rekuita zvese zvinobvira kuzadzisa zvaunoda.
Soy Sauce Mapaketi, Ladyfinger Cookie, Kudya Nzungu Dzakarungwa, Hawthorn Strip, Vana Mabhisikiti, Mutsva Bean Curd Stick,